UPDATE: ZAHAN ZAN HAKHA I KAHNAK AH RALKAP TAM NGAI AN THI HOI – The Chinlung Post
Thawngpang ttha taktak share cio hna usih. Zahanzan May nithum zan suimilam hleikhat le minute pakul hrawngah Ralhrang kawlralkap hna le CDF Hakha hna cu an i kap. Zahanzan i kahnak ah atlawmbik minung pali an nunnak aliam pin ahadang minung pahra renglo hliam an tuar rih tiah Chinland Defense Force nih tunai ah an langhter.
Chinland Defense Force Hakha ခုခံကာကွယ်မှု သတင်း. ၃ မေလ ၂၀၂၁ ညပိုင်း ၁၁ နာရီ ၂၀ မိနစ် ၀န်းကျင်တွင် ချင်း​​ပြည်နယ်၊ ဟားခါးမြို့ (၆) လမ်းဆုံရှိ လုံခြုံရေးစခန်းတွင် CDF_ Hakha နှင့် အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီစစ်တပ်အ‌ကြား ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပြီး ရန်သူဘက်မှ အနည်းဆုံး ၄ ဦး ကျဆုံး၊ ၁၀ ကျော် ထိခိုက်မှု ရှိခဲ့သည်။ မေလ (၄)ရက်၊ ၂၀၂၁ Contact Number:+919362213680. Credit: Chinland Defense Force.
NIZAN CDF HAKHA LE RALKAP I KAHNAK KONG THAWNGFIANG